Bịaruo Chineke Nso n’Ekpere | Bible Na-akụzi
9 Ònye ka anyị kwesịrị ikpegara ekpere? Jizọs kụziiri ụmụazụ ya ikpegara “Nna anyị nke nọ n’eluigwe” ekpere. (Matiu 6:9) N’ihi ya, anyị kwesịrị ikpegara nanị Jehova Chineke ekpere. Otú ọ dị, Jehova na-achọ ka anyị kwanyere ọkwá nke Ọkpara ọ mụrụ nanị ya, bụ́ Jizọs Kraịst, ùgwù. Dị ka anyị hụrụ n’Isi nke 5 nke akwụkwọ a, e zitere Jizọs n’ụwa dị ka onye mgbapụta iji gbapụta anyị ná mmehie na ọnwụ. (Jọn 3:16; Ndị Rom 5:12) Ọ bụ ya bụ Nnukwu Onye Nchụàjà na Onyeikpe a họpụtara ahọpụta. (Jọn 5:22; Ndị Hibru 6:20) N’ihi ya, Akwụkwọ Nsọ na-agwa anyị ka anyị na-ekpe ekpere site n’aha Jizọs. Jizọs n’onwe ya kwuru, sị: “Abụ m ụzọ na eziokwu na ndụ. Ọ dịghị onye na-abịakwute Nna m ma ọ́ bụghị site na mụ.” (Jọn 14:6) Ka e wee nụ ekpere anyị, anyị aghaghị ikpegara nanị Jehova ekpere site n’aha Ọkpara ya.
10 Ọ̀ bụ iwu na a ga-enwe otú pụrụ iche anyị na-aghaghị isi nọrọ mgbe anyị na-ekpe ekpere? Ee e. Jehova ekwughị na ọ dị otu ụzọ anyị na-aghaghị isi nọrọ ma ọ bụ debe aka. Bible na-akụzi na e nwere ụzọ ndị kwesịrị ekwesị a pụrụ isi nọrọ kpee ekpere. Ha na-agụnye ịnọdụ ala, ihulata isi, igbu ikpere n’ala, na iguzo ọtọ. (1 Ihe E Mere 17:16; Nehemaịa 8:6; Daniel 6:10; Mak 11:25) Ihe dị mkpa n’ezie abụghị otú pụrụ iche a pụrụ isi nọrọ bụ́ nke ndị ọzọ pụrụ ịhụ anya, kama ọ bụ ọnọdụ obi ziri ezi. N’ezie, mgbe anyị na-eme ihe ndị anyị na-eme kwa ụbọchị ma ọ bụ chee ọnọdụ chọrọ ime ihe ngwa ngwa ihu, anyị pụrụ ịnọ ebe ọ bụla anyị nọ kpee ekpere n’obi anyị. Jehova na-anụ ekpere ndị dị otú ahụ n’agbanyeghị na e nwere ike ndị ọzọ nọ anyị nso agatụdịghị ama na anyị kpere ekpere.—Nehemaịa 2:1-6.
11 Olee ihe ndị anyị pụrụ ikpe ekpere maka ha? Bible na-akọwa, sị: “N’agbanyeghị ihe ọ bụ nke anyị na-arịọ dị ka uche ya si dị, ọ [Jehova] na-anụ olu anyị.” (1 Jọn 5:14) N’ihi ya, anyị pụrụ ikpe ekpere maka ihe ọ bụla kwekọrọ n’uche Chineke. Ọ̀ bụ uche ya ka anyị na-ekpe ekpere banyere ihe ndị na-enye anyị nsogbu n’obi? Eenụ! Ikpegara Jehova ekpere dị nnọọ ka ịgwa ezi enyi okwu. Anyị pụrụ ịgwa Chineke obi anyị, ‘na-awụsị obi anyị n’ihu Ya dị ka mmiri.’ (Abụ Ọma 62:8) Anyị kwesịrị ịrịọ maka mmụọ nsọ, n’ihi na ọ ga-enyere anyị aka ime ihe ziri ezi. (Luk 11:13) Anyị pụkwara ịrịọ maka nduzi n’ime mkpebi ndị ezi uche dị na ha nakwa maka ume iji nagide ihe isi ike. (Jems 1:5) Ọ bụrụ na anyị emee mmehie, anyị kwesịrị ịrịọ maka mgbaghara mmehie dabere n’àjà mgbapụta Kraịst. (Ndị Efesọs 1:3, 7) N’ezie, ọ bụghị nanị ihe ndị metụtara anyị ka anyị kwesịrị itinye n’ekpere. Anyị kwesịrị itinye ndị ọzọ n’ekpere anyị—ndị òtù ezinụlọ anyị nakwa ndị anyị na ha na-efekọ ofufe.—Ọrụ 12:5; Ndị Kọlọsi 4:12.
13 Olee otú ekpere anyị kwesịrị itoru ogologo? Bible ekwughị otú ekpere mmadụ na-ekpe nanị ya ma ọ bụ n’ihu ọha kwesịrị itoru ogologo. Ha pụrụ ịbụ ekpere dị mkpirikpi e kpere tupu e riwe nri ma ọ bụ ogologo ekpere onwe onye anyị nke anyị nọ na ya awụsịrị Jehova obi anyị. (1 Samuel 1:12, 15) Otú ọ dị, Jizọs katọrọ ndị bụ́ ndị ezi omume n’anya onwe ha, bụ́ ndị na-ekpe ogologo ekpere ma na-ekpe ya n’ụzọ ga-adọta mmasị ndị ọzọ. (Luk 20:46, 47) Ekpere ndị dị otú ahụ adịghị amasị Jehova. Ihe dị mkpa bụ ka anyị jiri obi anyị dum kpee ekpere. N’ihi ya, otú ekpere a na-anakwere kwesịrị itoru ogologo pụrụ ịdịgasị iche dị ka mkpa na ọnọdụ e nwere si dị.
14 Ugboro ole ka anyị kwesịrị ịdị na-ekpe ekpere n’ụbọchị? Bible na-agba anyị ume ‘ikpe ekpere mgbe nile,’ ‘ịnọgidesi ike n’ekpere,’ na ‘ikpe ekpere n’akwụsịghị akwụsị.’ (Matiu 26:41; Ndị Rom 12:12; 1 Ndị Tesalọnaịka 5:17) Otú ọ dị, okwu ndị a apụtaghị na anyị ga-anọrịrị na-ekpegara Jehova ekpere n’oge ọ bụla n’ụbọchị. Kama nke ahụ, Bible na-agba anyị ume ikpe ekpere mgbe mgbe, ịnọgide na-ekele Jehova maka ihe ọma ndị ọ na-emere anyị nakwa ilegara ya anya maka nduzi, nkasi obi, na ume. Ọ́ bụghị ihe na-akasi obi ịmara na Jehova ekwughị otú ekpere anyị ga-etoru ogologo ma ọ bụ ugboro ole anyị pụrụ ịgwa ya okwu n’ekpere n’ụbọchị? Ọ bụrụ n’ezie na anyị nwere ekele maka ihe ùgwù nke ikpe ekpere, anyị agaghị achọ ohere ikpegara Nna anyị nke eluigwe ekpere achọ.
15 N’ihi gịnị ka anyị ji kwesị ịsị ‘Amen’ mgbe e kpesịrị ekpere? Okwu bụ́ “amen” pụtara “ka ọ dị otú ahụ.” Ihe atụ ndị e nwere n’Akwụkwọ Nsọ na-egosi na o kwesịrị ekwesị mmadụ ịsị “Amen” mgbe o kpesịrị ekpere onwe onye ma ọ bụ mgbe e kpesịrị ekpere n’ihu ọha. (1 Ihe E Mere 16:36; Abụ Ọma 41:13) Site n’ịsị “Amen” ná ngwụsị nke ekpere anyị, anyị na-egosi na ihe ndị anyị kwuru si anyị n’obi. Mgbe anyị kwuru “Amen”—n’ime obi anyị ma ọ bụ n’olu dara ụda—ka mmadụ kpesịrị ekpere ihu ọha, anyị na-egosi na anyị kwenyere n’ihe o kwuru.—1 Ndị Kọrint 14:16.
Jehova Chineke, Onye kere eluigwe na ala na-akpọ anyị òkù ka anyị bịa bụrụ enyi ya, ọ na-ekwekwa anyị nkwa na anyị ga-abụli enyi ya.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Bịaruo Chineke Nso n’Ekpere
bh isi 17 p. 164-173